‘जेरी’ले के गर्ला अनमोललाई ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘जेरी’ले के गर्ला अनमोललाई ?
‘होस्टेल’बाट इन्ट्रि गराएर अभिनयको मुल बाटोमा हिड्न निर्देशन गरेका हेमराज बिसिले फेरी एकपटक अनमोल केसिलाई साथ लिएका छन् । कार्तिक २८ मा रिलिज हुने ‘जेरी’ नामक चलचित्रमा भबिष्यको दमदार नेपाली स्टार अनमोललाई अभिनयमा उतारेका छन् ।
चलचित्रले हालसम्म एक टिजर र एक ट्रेलर मात्र सार्वजनिक गरेको छ । यि दुई प्रचार सामग्रीबाट नै अनमोलले आफुलाई दह्रो उभ्याईसकेका छन् । अनमोलका पिता नायक भुवन केसिलाई नेपालकै माथिल्लो अभिनय खुबि भएको नायक मान्नेहरुका लागि मात्र होइन नयाँ पुस्ताका दर्शकलाई समेत अनमोलले आफ्नो बनाईसकेका छन् ।
सुनिल रावलले बनाएको ‘होस्टेल’मा प्रमूख पात्रको रुपमा देखिएका अनमोल त्यसअघि नै आफ्नै पिताको चलचित्र ‘साथी म तिम्रो’मा शिर्ष गीतमा देखिँदा युवा जमात उनकै पछि थियो । त्यसलाई होस्टेलले अरु पाईला थपिदियो ।
अब अनमोलको परिक्षाको घडि छ । के उनि एक स्टारका छोरा भएर मात्रै यो स्थानमा छन् या साँच्चिकै भबिष्यका स्टार हुन् त्यसको नतिजा ‘जेरी’ले दिनेछ । होस्टल’ रिलिज भएको झण्डै डेढ वर्ष पछि उनि अभिनयमा देखिन लागेका हुन् ।
‘जेरी’मा अनमोलसहित अन्ना शर्मा, अमल्या शर्मा, अभिषेक मान शेरचन आदि कलाकारको मुख्य भूमिका छ । मनोज शेरचनले बनाएको यो चलचित्रलाई सम्राट प्रसाद गौचन र निर्देशक बिसीले लेखेका हुन् । नरेन लिम्बुको संगीत, शैलेन्द्र डि कार्कीको छायांकन तथा सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन छ ।
एकपटक रुचेको हेमराज र अनमोलको केमेष्ट्रि फेरी रुचाईन्छ या रुचाईँदैन त्यसको लागि रिलिज सम्म पर्खनुपर्नेछ ।